क्लब फुटबलको दबदबा - खेलकुद - साप्ताहिक
क्लब फुटबलको दबदबा
रुसमा जारी २१ औं विश्वकप फुटबलमा विभिन्न देशका ७ सय ३६ जना फुटबल खेलाडी सहभागी छन् । तीमध्ये ५ सय २७ जना खेलाडी आफ्नो मुलुकको नभई विदेशी क्लबका लागि फुटबल खेल्छन् । रुस पुग्ने टिममध्ये इंग्ल्याण्ड मात्र यस्तो टिम हो जसका सबै खेलाडी आफ्नै देशका व्यवसायिक क्लबबाट फुटबल खेल्छन् । बाँकी ३१ देशबाट खेलिरहेका अधिकांश खेलाडी अर्काको देशको व्यवसायिक क्लबबाट फुटबल खेल्छन् । तीमध्ये पनि सेनेगल र स्वीडेनको फुटबल टिममा परेका कुनै पनि खेलाडी आफ्नो देशको क्लबका लागि खेल्दैनन् ।
स्वीट्जरल्याण्ड, आइसल्याण्ड, नाइजेरिया तथा बेल्जियमको टिममा समावेश खेलाडीहरूमध्ये एक/एक खेलाडी मात्र आफ्नो देशको क्लबका लागि खेल्छन् । समग्रमा हेर्ने हो भने विश्वकपमा सहभागी ७ सय ३६ जना फुटबल खेलाडीमध्ये २ सय ९ खेलाडी अर्थात् २८ प्रतिशतले मात्र आफ्नो देशको क्लबका लागि खेल्छन् भने बाँकी ७२ प्रतिशत खेलाडी विदेशी क्लबहरूसँग अनुबन्धित छन् । इंग्ल्याण्डका सबै २३ जना फुटबल खेलाडी आफ्नै देशको क्लबबाट खेल्छन् भने रुसका २३ खेलाडीमध्ये २१ जना आफ्नै देशका क्लबबाट खेल्छन् । यो मामिलामा स्पेन र साउदी अरेबिया पनि अगाडि छन् । साउदी अरेबियाका २० तथा स्पेनका १९ जना खेलाडी स्वदेशी क्लबबाट खेल्छन् ।
क्लबका कति खेलाडी ?
व्यवसायिक भएका कारणले विश्वकपमा व्यवसायिक फुटबल क्लबको दबदबा हुनु स्वभाविक हो । व्यवसायिक क्लबहरूको दबदबामा पनि इंग्ल्याण्डका क्लबहरू अगाडि छन् । इंग्ल्याण्डको चर्चित इंग्लिस प्रिमियर लिग विजेता म्यानचेस्टर सिटीका १६जना खेलाडी विश्वकपमा छन् । जसमा इंग्ल्याण्ड र ब्राजिलका ४/४, अर्जेन्टिना र बेल्जियमका २/२ तथा फ्रान्स, जर्मनी, पोर्चुगल र स्पेनका १/१ जना खेलाडी छन् । त्यसबाहेक इंग्ल्याण्डकै टोटेनह्याम हटस्पर क्लबका १२, चेल्सीका १२ तथा म्यानचेस्टर युनाइटेडका १२ जना खेलाडी विश्वकपमा आ–आफ्नो देशबाट देखिनेछन् ।
यसैगरी स्पेनको रियल म्याड्रिडका १५ जना खेलाडीले विश्वकपमा आ—आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । विश्वकपमा देखिने सबैभन्दा धेरै ५ जना खेलाडीले स्पेनका तर्फबाट विश्वकप खेल्दैछन् भने क्रोसियाका ३, ब्राजिलका २ तथा कोस्टारिका, फ्रान्स, जर्मनी, मोरक्को र पोर्चुगलका १/१ जना खेलाडीले आ–आफ्नो देशबाट खेल्दैछन् । त्यसैगरी स्पेनकै अर्को क्लब बार्सिलोनाका १४ जना खेलाडी विश्वकपमा देखा पर्दैछन् । तीमध्ये स्पेनबाट ४, ब्राजिल र फ्रान्सबाट २/२, अर्जेन्टिना, बेल्जियम, कोलम्बिया, क्रोयसिया, जर्मनी र उरुग्वेबाट १/१ जना खेलाडीले विश्वकप खेल्दैछन् ।
अन्य क्लबको हकमा फ्रान्सको पेरिस सेन्ट जर्मेन क्लबबाट खेल्ने १२ जना खेलाडी, जर्मनीको बार्यन म्युनिखबाट खेल्ने ११ जना खेलाडी पनि आ—आफ्नो देशबाट विश्वकप खेल्दैछन् । यो तथ्यमा अर्को रोचक कुरा के छ भने विश्वकपमा ६० वर्षपछि छनोट हुन नसकेको इटालीको क्लब जुभेन्ट्सबाट खेल्ने ११ जना खेलाडीले पनि आ—आफ्नो देशबाट विश्वकप खेल्दैछन् ।
अर्को रमाइलो तथ्य के पनि छ भने अहिलेका सर्वाधिक चर्चित फुटबल खेलाडीहरूमध्ये टोट्नह्याम हटस्परबाट खेल्ने इंग्ल्याण्डका ह्यारी केन, बार्यन म्युनिखबाट खेल्ने जर्मनीका थोमस मुलर तथा रियल म्याड्रिडबाट खेल्ने सर्जियो रामोस मात्र यस्ता खेलाडी हुन् जसले क्लब फुटबल पनि स्वदेशी क्लबबाटै खेल्छन् ।
भाग्यमानी थ्रीस्टार, अभागी आर्मी
कसैसंग आर्थिक लेनदेख नरहेको क्लब डेजाभूको स्पष्टोक्ति
मौलाउँदै पब संस्कृति
तुहियो रोनाल्डोको सपना वैशाख ४, २०७६
वर्ष २०७५ का चर्चित खेल अनुहार वैशाख २, २०७६
एसियाडमा रजत पदक जितेको वर्ष चैत्र २९, २०७५
सपना देख्न नछाड्नु चैत्र २८, २०७५
कमब्याक गर्दै बास्केटबल चैत्र २७, २०७५
आशावादी शम्भु चैत्र २६, २०७५
सफलताले दिलाएको सुविधा चैत्र २५, २०७५
आईपीएलमा फिक्सिङ ? चैत्र २४, २०७५
बेकह्यामजस्तै देखिने रहर चैत्र २१, २०७५
घुमन्ते सन्दीपको पालो कहिले ? चैत्र २०, २०७५